Nampiasa Ny Fakantsariny Hanaovana Fanentanana ilay Nepali Mpaka Saripika ho Fiarovana Ny Zavaboary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2017 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, Aymara, Deutsch, বাংলা, नेपाली, Français, عربي, 日本語, Italiano, English
Tsy mbola naha-afa-po an'i Sagar Giri ny sary manjavozavo miaraka amin'ny foto-kevitra tsy tsara petraka sy ny loko matroka izay hitany manodidina azy. Nanosika azy hitondra ny fakantsariny izany mba hanaovany ezaka handaminana ny zava-nisy.
Ary androany raha niala sasatra aho dia niantso ahy tampoka i Navaraj (Mpitantana ao amin'ny Chitwan Gaida Lodge ), nahazo antso avy any amin'ny dadako izy fa misy leoparda eo amoron'ny renirano Rapti. Minitra vitsivitsy monja miala amin'ny toeram-pizahantanin'i Sauraha ny tohodranon'ny Renirano. Nihazakazaka avy hatrany aho niaraka tamin'ny fakan-tsariko ary tonga tany an-toerana afaka minitra vitsivitsy. Nanara-maso azy ny dadako ary nanoro ahy ny toerana miampita ny Renirano lavitra izay nisy ilay Leoparda ary nanomboka avy hatrany ny fangalako sary !!